Land ल्यान्डि Page पृष्ठ गल्तीहरू तपाइँबाट अलग रहनु पर्छ Martech Zone
तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ कति चीजहरूले कुनै पृष्ठलाई कसैको ध्यान भंग गराउँदछ जुन उनीहरू आइपुग्छन्। बटनहरू, नेभिगेसन, छविहरू, बुलेट पोइंटहरू, बोल्ड शब्दहरू ... ती सबैले आगन्तुकको ध्यान खिच्छ। जबकि यो एक फाइदा हो जब तपाईं पृष्ठलाई अप्टिमाइज गर्दै हुनुहुन्छ र जानबूझेर आगन्तुकलाई पछ्याउनको लागि ती तत्वहरू राख्नुहुन्छ, गलत तत्व वा बाह्य तत्वहरू थप गर्नाले तपाईं भ्रमण गर्न चाहनुभएको कल-टु-एक्शनबाट आगन्तुकलाई लिन सक्नुहुनेछ। र रूपान्तरण गर्नुहोस्।
प्रतिलिपिबल्गरले यो शानदार इन्फोग्राफिक जारी गर्‍यो जुन तपाईंको साइटमा आगन्तुक र कोहीले दिशाहरू पछ्याईएको बीचमा समानता सिर्जना गर्दछ, Land ल्यान्डि Page पृष्ठ मुफहरू जुन तपाईंलाई व्यवसाय गुमाउँदछ। मलाई यो समानता मनपर्दछ किनकि यो तपाईको यात्राको बारे सोच्नकै लागि उचित छ।
पहिलो कुरा जुन हामी यात्रामा गर्छौं त्यो हो उत्पत्ति र गन्तव्य नक्शा, त्यसपछि बीचमा सबैभन्दा उत्तम मार्ग प्रदान गर्दछ। जब तपाईं हुनुहुन्छ तपाईंको अवतरण पृष्ठ म्यापि। गर्दै, आशा छ कि तपाईले यही गरिरहनु भएको छ - तपाईका आगन्तुकहरु कहाँबाट आउँदैछन् भन्ने बारे सोच्दै र गन्तव्य के हो भनेर कुनै प्रश्न सोधेनन्। यहाँ छन् Common साधारण गल्तीहरू तपाईं अवतरण पृष्ठहरू सिर्जना गर्दा बनाउन सक्नुहुनेछ (तर बेवास्ता गर्नुपर्छ):
तपाइँले बुझाउनु भएन रूपान्तरण को फाइदा.
तपाईंलेaप्रदान गर्नुभएन रूपान्तरण को लागी सरल मार्ग.
तपाईंले स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्नुभएको थिएन एकल गन्तव्य वा परिणाम.
तिमीले गरेनौ कुञ्जी जानकारी संवाद गर्नुहोस् प्रभावकारी रूपमा।
तिमीले गरेनौ अनावश्यक सामग्री हटाउनुहोस्.
तपाईले धेरै प्रयोग गर्नुभयो शब्दजाल र जटिल सर्तहरू।
तपाईं डाटा, विवरण र प्रशंसापत्र संग तपाईंको सामग्री समर्थन गर्नुभयो तपाईंको विश्वस्तता बढाउनुहोस्.
तिमीले गरेनौ बाह्य विकल्पहरू हटाउनुहोस् नेभिगेसन र अतिरिक्त लिंकहरू जस्तै।
तपाईंले निश्चित गर्नुभएन कि तपाईंको अवतरण पृष्ठ चाँडै लोड भयो!
टैग: जटिल शब्दावलीरूपान्तरण लाभcopybloggerगन्तव्यशब्दजालकुञ्जी जानकारील्यान्डिङ पृष्ठ डिजाइनअवतरण पृष्ठ goofsअवतरण पृष्ठ इन्फोग्राफिकअवतरण पृष्ठ गल्तीहरूअवतरण पृष्ठ अनुकूलनरूपान्तरण गर्न पथसमर्थन सामग्रीप्रशंसापत्रधेरै धेरै सामग्री
सर्वेक्षण: तपाईंको सामग्री उत्पादकता तुलना कसरी गर्छ?